Bukela Izinketho Zakho Zokufanisa Igama lakho elingukhiye ku-Adwords | Martech Zone
Bukela Izinketho Zakho Zokufanisa Igama Lakho elingukhiye ku-Adwords
ISonto, May 24, 2009 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 4, 2017 Douglas Karr
Kuleli sonto bengiseHouston nase-Austin ngikhuluma futhi ngiyi-panelist yabo Izingqungquthela Zokumaketha eziku-inthanethi. Qiniseka ukuthi ubheka ikhasi labo lamadolobha nama-ajenda bese uya emcimbini… ikhwalithi yezethulo ibivelele futhi ophethe ingqungquthela, u-Aaron Kahlow, ugcine imicimbi iheha futhi ijabulisa.
Izolo ngabelane ngethiphu kusuka ku- Ukusesha kwe-Apogee ekuthengeni izixhumanisi kusayithi lomuntu wesithathu. Elinye icebo engilitholile engqungqutheleni libukeka njengethiphu yokuqala ngokuphelele. Uma ngikhuluma iqiniso, bengicabanga ukuthi i-Google Adwords ibhalelwe i- ukufana ngqo, kodwa abanalo! Azenzakalelayo kufayela le- umdlalo obanzi (kubonakala sengathi okubi uma ungibuza)! Kunezinhlobo ezi-4 zama-algorithm afanayo:
eliyisihluthulelo = umdlalo obanzi
“Igama elingukhiye” = fanisa ibinzana ngqo
[igama elingukhiye] = fanisa isikhathi ngqo kuphela
- igama elingukhiye = musa ukufana naleli gama
Kwami Iwebhusayithi yeNavy Veteran, Ngibonile izikhangiso eziningi zoDokotela bezilwane eza! Nginesiqiniseko sokuthi ishaya ngegama elingukhiye elithi 'Vet', kepha umkhangisi kufanele aqinisekise ukuthi ufuna iVet, ngenkathi eqinisekisa ukuthi ayifani 'neNavy Vet'.
Inothi lokugcina, uma i-interface endala ye-Adwords ikudidile… Ngilapho kanye nawe. Ngingene ngemvume namuhla futhi isikhombimsebenzisi esisha se-beta sihle impela. Kufanele kube nesixhumanisi phezulu kwesokudla ukusihlola kuqala uma uthola ithuba. Ku-interface entsha, ukufana kwegama elingukhiye kufihlwe ngokuphelele futhi udinga ukuchofoza kusixhumanisi ukuze usikhulise!
Tags: qhafazai-google adwordseliyisihluthuleloOMSppc
Ulimi Lomzimba Wedijithali Engqungqutheleni Yokumaketha Oku-inthanethi
Jun 5, 2009 ku-5: 09 PM
Ukuba ne- izinhlobo ze-ppc zamagama asemqoka kungaba nomthelela omuhle kakhulu emikhankasweni. Ngake ngakwazi ukusika i-cpa ngokuphawulekayo ngokushintsha amagama ambalwa ukuze ngifanise umdlalo.